Jereo i Sina sy ireo zorony izay tsy azonao adino | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Shina, kolontsaina, General, mpitarika, Ocio, Fitsangatsanganana any Azia
Betsaka angamba izao mahita an'i ShinaNefa izy io dia iray amin'ireo firenena tranainy indrindra eto an-tany ary iray amin'ireo kolontsaina mahavariana indrindra. Ilaina ny mandeha sy mamantatra azy, fa tsy amin'ny dia tsotra sy haingana fa ny handraisan-tsaina zavatra kely kokoa sy handeha tsara araka izay azo atao.
Firenena iray, Sina na firenena hafa, dia mahafinaritra kokoa rehefa fantatrao ny momba ny tantarany, ny kolontsainy, ny jeografia misy azy. Rehefa fantatrao ny misy anao, nahoana no nisy zavatra toy izany naorina, nahoana no nisy zavatra hafa nitranga. Izay no fomba tsara indrindra hanakaikezana ary io dia io no arosontsika anio ao amin'ny Actualidad Viajes: izay rehetra tokony ho fantatrao momba an'i Sina alohan'ny dia.
1 Tantara fohy an'i Sina
2 Kolontsaina sinoa
3 Jeografia China
4 Manintona any Sina
Tantara fohy an'i Sina
Ny tantaran'ny firenena rehetra dia takona ao anatin'ny zavona, amin'ny foko samy hafa mivelatra mandra-pahatapitry ny fotoana dia manome fanjakana maoderina, fanjakana na firenena.
Manana tantara dimy arivo taona i Sina ary mizara vanim-potoana dimy izy io: ny Fikambanana Primitive, ny Fikambanan'ny Mpanompo, ny Fikambanana Feudal, ny Semi-feudal ary ny Semi-kolonialy ary ny Socialist Society. Nandritra ireo fe-potoana dimy niseho ireo tompo mahery dia nisy ny ady an-trano sy ireo tarana-mpanjaka maromaro nipoitra sy nianjera nandritra ny taonjato maro mandra-pahatongan'ny fananganana ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina tamin'ny 1949 ary ny fanonganana mandrakizay ny fanjakan'ny mpanjaka.
teo anivon 'ny tarana-mpanjaka malaza sy manan-danja indrindras, izay nanamarika ny fivoaran'ny sivilizasiona sinoa, azontsika atao ny miantso ny Dinam-panjakan'i Yuan, Ming, Qing, Song ary Tang. Ity farany dia iray amin'ireo niavaka indrindra noho izy nitarika an'i Sina ho firenena matanjaka sy manankarena, ary toy izany koa no nitranga tamin'ny Dinam-panjakan'i Ming, fotoana iray izay nanomboka nivelatra ny kapitalisma tao Shina sy ny indostrian'ny porselana izay farany ankafizin'ny tanàn-dehibe sy ny tsena, ny lalana amin'ny làlana mankany amin'ny fiarahamonina maoderina kokoa.
Emperora farany an'i Sina
Ny tarana-mpanjaka sinoa farany indrindra dia ny Qing, izay amperora, Pu Yi, nidina tamin'ny tantara tamin'ny lasa ny Emperora farany an'i Chine tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-XNUMX.
Fantatsika rehetra fa mahafinaritra ny kolontsaina sinoa. Ny asa-tanana sy ny zavakanto sinoa dia harena roa manankarena indrindra. Tao anatin'izay dimy arivo taona nisian'ny tantara izay, ny mpanao asa tanana sinoa dia tsy nanao afa-tsy ny namorona zava-mahatalanjona tamin'ny zavatra rehetra nananany teo am-pelatanany. Nanome fiainana opera tsara tarehy ihany koa izy ireo, mozika tokana sy tsy mety maty, nita taratra ny zanak'olombelona, ​​ny fivavahana ary nandinika tsara ny kintana sy ny fihetsik'izy ireo koa.
El jade sinoa, ny kanto metaly fantatra amin'ny hoe fisarahana, ny fanaka varahina, ny calligraphy sinoa, ny amboradara, kilalao folk, papangohazo vita amin'ny taratasy sy volotsangana, sambo lacquered amin'ny loko isan-karazany.
Izy ireo koa hajia hajia vita amin'ny vy, jade, nify biby na tandroka, ny saribakoly Teatra ary mazava ho azy, landy ary ny vokatra rehetra azo avy amin'ny kofehy landy izay afaka manenona kankana tsotra ao anatin'ny 28 andro fohy iainany. Izany rehetra izany dia ampahany amin'ny lova ara-kolontsain'ny Sinoa.
Ankehitriny, ny boky ara-tsiansa sy ny fanafody dia manankarena amin'ity kolontsaina ity ary ny sasany amin'ireo mpanohana azy dia nanjary fanomezana tsara hoentina any amin'ny fianakaviantsika sy ny namantsika.
Miaraka amin'ny sarintanin'i Azia eo an-tànana no ahitantsika izany Sina dia firenena goavana izay mandeha manodidina ny dimy arivo kilaometatra. Nozaraina ho faritra dimy izy: Shina Atsinanana, nozaraina ho faritra telo hafa, Tibet sy Xinjiang - Mongolia.
Ny jeografia any Sina dia samy hafa be ary manana tendrombohitra, tanety, vongan-dranomandry, havoana, dongom-pasika, tanety karst, kaldera volkano, morontsiraka ary ala. Ankoatr'izay, any amin'ny tany Tibetana dia ny tendrombohitra avo indrindra eto an-tany, ny Tendrombohitra Everest (efa ho 9 metatra ny haavony), voahodidin'ny tendrombohitra avo hafa, izay no antony iantsoana ity faritra ity hoe "tampon'izao tontolo izao."
China dia manana renirano 50 arivo ary ny ankamaroany dia mikoriana mankany Pasifika. ny Reniranon'i Yangtze Io no renirano manandanja indrindra, izay misy 6300 kilometatra ao ambadik'i Amazone sy i Neily, ilay tohodranon'i Three Gorges malaza, fahagagana momba ny injeniera maoderina, naorina teo amboniny. Misy koa ny Renirano mavo miaraka amin'ny maherin'ny 5 kilometatra ny fanitarana. Ny renirano sinoa dia mitombo hatrany amoron'ny renirano.
Tokony holazaina fa satria firenena lehibe toy izany i Shina misy toetr'andro samy hafa ary mamela izany hisy zavamaniry sy biby samy hafa izay tsirairay amin'ireo faritra ireo. Izany no mahatonga ny samy rameva sy soavaly toy ny leoparda, gidro, amboadia, antilopa na panda.
Manintona any Sina
Mpizahatany maro no mifantoka amin'ny faritra iray ao Shina fotsiny: Beijing, Xian, Shanghai, Hong Kong. Azoko tsara izy ireo, toerana mora idirana izy ireo ary misy toerana fizahan-tany maro. Saingy goavambe i Sina, koa raha mangetaheta ny fitsangatsanganana ianao dia ny fahaverezam-bolana iray no tsara ary vonona ny handeha be.
Any Beijing isika dia tsy afaka mahita an'io Tanàna voarara, ilay tanàna emperora taloha misy tranobe an-jatony sy efitrano an'arivony. Manoro hevitra ny hijery ny sarimihetsika aho aloha Ny Emperora farany Eny, nalaina horonantsary teo izy io ary manome lesona tsara momba ny maritrano sy ny tantara.
Is koa Kianja Tinanamen, ny Mausolika an'i Mao, ny Kianja nasionaly, ny Tempolin'ny lanitra, ny Fasana Ming, ny fahavaratra Palace, fizarana ao amin'ny Rindrin'i Sina akaiky izany ary ny hutongs, ireo Chinatown nentim-paharazana amin'ny arabe ety sy trano taloha misy tokontany.
En Hong Kong, amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Sina, dia tsy maintsy mitsidika ianao Victoria Bay mandinika ny tontolon'ny skyscrapers, Tendrombohitra Victoria, ilay havoana izay tratran'ny tramà, ny Avenue of the Stars, ny Tempolin'i Wong Tai Sin, Causeway Bay, Repulse Bay ary avy eo mandeha tongotra fotsiny.
En Shanghai ny làlana tsara indrindra rehetra dia Làlana Nanjing. Ao ny tranombakoka Shanghai, ny Tilikambo Voahangy Atsinanana, ny Tempolin'i Jade Buddha, The Bund ary ilay zaridaina Yuyuan tsara tarehy. Amin'ny fitsangatsanganana dia mamporisika ny tsy hanadino ireo "tanàn-drano anaty rano" zato taona Qibao y Zhujiajiao.
Ho an'ny velaran-tany sinoa mahazatra dia Guilin: havoana, farihy, renirano, ala volotsangana, lava-bato mahafinaritra. Any Guilin no misy ny mpizahatany Zohy an'ny sodina mena, la Trunk Hill, ny Seven Stars Park, ny tanimbary ary fitsangantsanganana an-dranomasina Li.
Xian dia tanàna manana tantara mihoatra ny telo arivo taona ary ny manintona azy dia: Mpiady Terracotta, rindrina medieval voatahiry tsara indrindra any Shina, ny Bell Tower, ny Famen Temple, ny Giose Goose Pagoda, ny Tang Palace ary mausoleum dinastika mahaliana roa.
Tibet Faritra mizaka tena izy ary mila alalana manokana hidirana. Rehefa tafiditra ao anatin'ny fitsidihana tsy maintsy atao dia Lhasa, ny renivohitra, miaraka amin'ny arabe sy ny tempoliny: ny Sera, ny Ganden ary ny Deprung, indrindra. Ary aza mitsahatra mankany aminy Farihy selestialy, farihy masina izay amin'ny haavon'ny 4720 metatra.
Misy tanàna Tibetana iray hafa antsoina Shigatse Ilaina ny mahafantatra ary ny Monasiteran'i Tashihunpo ary ny Shalu aloha. Misy koa ny Lapan'ny Panchen Lama.
Raha momba ny morontsiraka mahafinaritra dia tsy maintsy fantatrao Sanya, tanàna amoron-tsiraka avy amin'ny faritanin'i Hainan izay mahay manambatra tendrombohitra, ranomasina, renirano, tanàna ary torapasika tsara. Manaraka ny morontsiraka dia Xiamen, fa any amin'ny faritanin'i Fujian, iray amin'ireo tanàna seranan-tsambo manandanja indrindra ao Shina nandritra ny taonjato maro.
Ary ny very any Shina dia tsy misy izany Mongolia anaty. Faritra mizaka tena izy, izay eo anelanelan'ny Repoblikan'i Mongolia sy Russia. Io no faritany sinoa midadasika indrindra amin'ny rehetra ary fahatelo ny habeny. Manana mponina 24 tapitrisa sy foko maromaro izy io.
Miovaova be ny toetrandro mandritra ny taona, ka tokony hialana amin'ny hatsiaka sy ririnina lava ary araraoty ny fahavaratra, na dia fohy aza, dia mafana. Io no tanin'i Genghis Khan ao koa ny tranombakoka Genghis Khan, saingy misy ihany koa ny tempoly, pagoda ary ala maitso sy malalaka izay azon'ny mpizahatany atao miaina ny fomba fiaina mongoliana mpifindra monina. Fahafinaretana.
Ny marina dia firenena mahavariana i Shina ary tsy azoko daholo izay nolazaiko, fa izany indrindra no mampiavaka azy: tsy maninona ny haben'ny zavatra lazain'izy ireo aminao, ny habetsaky ny vakiteny, ny sary no jerenao . Ho bebe kokoa hatrany i Shina rehefa mitsidika azy ianao amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Shina » Zava-misy mahaliana momba an'i Sina: tantara, kolontsaina, jeografia ary zavatra manintona
ana azzano dia hoy izy:
Tena ilaina ny hevitrao, ho avy any Chine aho amin'ny volana aprily, ho raisiko izany
Valio i ana azzano